पीएचडी छोडेर केराखेतीमा जमेका लक्षिराम आचार्य | रक्त न्युज
पीएचडी छोडेर केराखेतीमा जमेका लक्षिराम आचार्य
भिम चाैधरी ,धनगढी
त्रिविबाट राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर, कानुनमा स्नातक गरेका लक्षिराम आचार्य अहिले केराखेतीमा जमेका छन्।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–३ कुचैनीका लक्षिराम (३६) राजनीतिमा सक्रिय रहँदा ५७ पटक सम्म पक्राउ परे। उनले प्राध्यापन पनि गरे। तर, आठ वर्षअघि प्राध्यापन र सक्रिय राजनीति छोडेर पूर्णकालीन किसान बने।
अहिले केरा खेतीबाटै सबै खर्च कटाएर वार्षिक २० लाखसम्म बचत गर्छन्। उनको फार्ममा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष २१ जनाले रोजगारी पाएका छन्।
पीएचडी छाडेर केराखेतीतर्फ
आचार्यले २०६९ सालमा विद्यावारिधि (पीएचडी) मा छात्रवृत्ति पाउन निकै कसरत गरे।
‘त्रिवि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका तत्कालीन डिनले कुन पार्टीको हो भनेर सोध्नुभयो’, आचार्य भन्छन्, ‘मैले कांग्रेस, माओवादी, एमाले होइन । अरू भन्नुपर्छ? भन्दा उहाँ मुसुमुसु हाँस्नुभयो।’
पैसा तिरेर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन, छात्रवृत्तिमा पाएनन्। आचार्यका बुवा तत्कालीन एमालेका जिल्ला नेता पराशर आचार्य (७३) अहिले पनि नेकपामै आबद्ध छन्। छोरा अर्को पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चामा लागेपछि बुवाले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग नगरेको उनी बताउँछन्। ‘त्यसपछि पीएचडी सपना छोडेर फर्किएँ । त्यसै वर्षदेखि कैलालीको गेटामा जग्गा लिजमा लिएर केराखेती सुरु गरें।’
आठ वर्षअघि केराखेती सुरु गरेका उनको लगानी अहिले झन्डै एक करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। गोदावरी नगरपालिका वडा– ६ र ७ मा गरी १५ बिघामा केराखेती गरिरहेका आचार्यले आम्दानी बढ्दै गएपछि थप सात बिघा जमिन लिजमा लिएका छन्।
राजनीति कमाइखाने भाँडो हैन
राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो बनाएको उनलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन। राजनीति गर्नेहरु भ्रष्टाचार र विकृतिमा मुछिएको, कसैमा पनि निष्ठा नरहेको देखेपछि उनलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा भयो। अर्कोतिर परिवारप्रतिको जिम्मेवारीले पनि व्यवसायिक कृषि गर्न दबाब पुग्योे।
‘उमेर छिप्पिँदै गएको छ, छोराछोरी हुर्किंदै छन्’, आचार्य भन्छन्, ‘उनीहरूलाई पढाउन र घर चलाउन त राजनीतिले सकिँदैन नि। त्यसैले केराखेती थालेको हुँ।’
राजनीतिलाई बेतलबी समाजसेवा ठान्ने उनलाई अरुले राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो बनाइएको पनि उनलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन।
सरकारले स्वदेशमा केही गर्न चाहनेलाई युवालाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै ढाँटिरहेको उनको गुनासो छ।
केरा आन्दोलनको नेतृत्व
आचार्यले केराखेती सुरु गर्दा कैलाली–कञ्चनपुरमा केराखेती न्यून थियो। अहिले व्यावसायिक केराखेती गर्ने किसानको संख्या उल्लेख्य छ।
पहिले विना परीक्षण भारतीय केरा आयात हुन्थ्यो। नेपालमा केरा उत्पादन बढी भएका बेला भारतीय व्यापारीले मूल्य घटाएर नेपाल पठाउँथे। उत्पादन कम भएका बेला मूल्य बढाउँथे।
भारतीय केराको निर्वाध आयातमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै आचार्यले आन्दोलन थाले। सुरुमा कैलाली र कञ्चनपुरका केरा किसानलाई भेला गर्दै आन्दोलन थालेका उनले विस्तारै कञ्चनपुरदेखि झापासम्मका केरा किसानलाई एकै थलोमा जम्मा गरे।
अन्ततः केरा किसानको आन्दोलनले सफलता पायो। अहिले भारतबाट केरा आयात गर्दा क्वारेन्टिन जाँच गर्नुपर्ने नियम लगाइएको छ। आचार्य भन्छन्, ‘सन्तुष्ट छु, आफूले गरेको आन्दोलनले किसानलाई फाइदा पुगेको छ।’
विद्यार्थी कालदेखि राजनीति
कैलालीको चुरे गाउँपालिका–१ मा जन्मेका आचार्य कक्षा ५ मा पढ्दादेखि नै राजनीतिक दलका पोस्टर टाँस्दै हिँड्थे। २०५१ सालको आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको प्रचारमा पोस्टर टाँसेको सम्झँदै आचार्य भन्छन्, ‘पारिवारिक पृष्ठभूमि तत्कालीन एमाले निकट थियो,
त्यसकारण पनि राजनीतिक झुकाव कम्युनिष्टतिरै भयो।’
कक्षा ७ पढ्दै गर्दा उनले अखिल क्रान्तिकारीको सदस्यता लिए। २०५७ सालमा धनगढीमा भएको अनेरास्ववियु छैटौंको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी राष्ट्रिय जनमोर्चामा जोडिए। त्यसपछि तत्कालीन माओवादीमा आवद्ध भए।
२०५८ सालमा सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच वार्ता चलिरहँदा उनले माओवादी परित्याग गरेर राष्ट्रिय जनमोर्चामै संलग्न भए। उनी भन्छन्, ‘संविधान सभाको माग गर्नकै लागि किन युद्ध गर्नुप¥यो, लाखौं मान्छे किन मार्नुप¥यो? भनेर माओवादीबाट अलग भएँ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चा कैलालीका विभिन्न पदमा रहिसकेका आचार्य अहिले उक्त पार्टीको केन्द्रीय परिषद् सदस्य छन्। ‘तर, म सक्रिय राजनीतिमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नु छ अर्कोतिर राजनीति जुन हिंसाबमा अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त्यस्तो भएन।’
५७ पटक गिरफ्तार
सबै जसो राजनीतिक आन्दोलनका अग्र मोर्चामा रहने आचार्य पटकपटक गरेर ५७ पटक गिरफ्तार भएका छन्। उनी भन्छन्, ‘कैलालीको कुनै प्रहरी चौकी बाँकी छैन म नथुनिएको।’
सानैदेखि पढाइमा अब्बल आचार्य प्लस टु पढ्दै गर्दादेखि पढाउन पनि सुरु गरिसकेका थिए।
पढाइ, राजनीति र जागिरमा समय मिलाउन नसकेपछि कुचैनीस्थित शिव नमुना निमाविको शिक्षक पदबाट उनले राजीनामा दिए।
आचार्य भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि प्राध्यानाध्यापक र क्याम्पस प्रमुख बन्ने प्रस्ताव आएका थिए। तर, मलाई लाग्छ, कृषि पेसा झन् खुला विश्वविद्यालय नै हो। यस क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ।’
आचार्यले २०६० सालमा डडेल्धुराकी गोमा जोशीसँग प्रगतिशील विवाह गरे। धनगढीस्थित पार्टी कार्यालयमा सार्वजनिक कार्यक्रमका बीच विवाह गरेका आचार्यको विवाह सञ्चारमाध्यममा समाचारको विषय बनेको थियो।
भोजभतेर नगरी विवाह गरेका आचार्यले निम्तो भने पत्रिकामा विज्ञापन गरेरै दिएका थिए।
२०७४ सालमा हावाहुरीका कारण आचार्यको फार्ममा ७० लाख रुपैयाँको बराबरको केरा नष्ट भयो। तर उनले सरकारबाट राहत सहयोग पाएनन्। अहिले नगरपालिकाबाट पनि सहयोग, सल्लाह र सुझाव नपाएको उनको गुनासो छ।
केराका बेर्नाका लागि नगर प्रमुखसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सहयोग नपाएको उनी बताउँछन्। सिँचाइका लागि पनि आफैंले सात लाख रुपैयाँ खर्च गरेर थोपा सिँचाइ जडान गरे। उनी भन्छन्, ‘सरकारले बिउ, प्रविधि, उपकरणमा त सहयोग गर्दैन नै, कम्तिमा रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो, त्यो पनि गर्दैन।’
आफ्नै बलबुतामा केरा खेती गरिरहेका आचार्य यही खेतीलाई अझै विस्तार गर्ने सोचमा छन्। भन्छन्, ‘केरा खेतीमै सन्तुष्ट छु, आफ्नै मेहनेतले कमाएको छु। कमाईले परिवार पाल्ने मात्र होइन अरुलाई पनि काम दिन सकेको छु ।’
अघिल्लो लेखमासंवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
अर्को लेखमादुई अध्यक्षको समझदारीले मात्र पार्टी चल्दैन :माधव नेपाल